Juventus Oo Meel Aan Barcelona Laga Marin Ka Martay, Ciyaaryahan Lama Taabtaan Ah Oo Ay Dalbadeen & Jawaabtii Barca - Gool24.Net
Intii lagu gudo jiray wada xaajoodkii ay ciyaaryahanada ku kala doonayeen dhawaanahan kooxaha Barcelona iyo Juventus, kooxda ree Talyaani ayaa u muuqatay inay hal mar gaadhay meel aanay waxba suurogal ka ahayn kaddib markii ay heshiiska ciyaartoy is-dhaafsi kusoo dareen magaca Frankie De Jong.
Barcelona oo kaliya suuqii xagaaga ee 2019 De Jong lacag 75 Milyan oo euro ah kagala soo wareegtay Ajax ayaa si dhakhso ah Juventus ugu dhirbaaxday dalabkaas iyagoo aan xataa wax faah-faahin ah bixinin.
De Jong ayaa ciyaartoy fure ah u ah Barcelona wakhti xaadirkan iyo mustaqbalka dhawba, in isaga loo ogolaado inuu kooxda ka tago ayaa ah mid ay gabi ahaanba meesha ka saareen madaxda sarre ee kooxdu.
Khadkan dhexe ee ree Netherlands ayaa xilli ciyaareedkiisii koowaad ee Camp Nou soo sameeyay qaab ciyaareedyo wanaagsan iyo kuwo liitaba balse waxa jirta kalsooni buuxda oo ay kooxdiisa iyo maamulkeedu ku qabaan.
Matthijs De Ligt oo ah saaxiibkii De Jong ee Ajax wakhtigana ka tirsan kooxda Juventus ayaa sidoo kale lagu sheegay mid ay suurogal tahay in heshiisyada kooxahaas dhex maraya lagu soo daro balse magaciisa ayaan wada hadalada lagu xusin.
Qaabka uu De Ligt u saldhigtay ayaan ahay marnaba sidii la filayay inuu ula qabsan doono isagoo kulamo badan kursiga keydka ka galay kooxda Turin balse inuu koox bedelasho sameeyo ayaan haatan qorshaha ugu jirin.
Xiddigaha ay labada kooxood kala doonayaan ayuu ugu horreeyaa Miralem Pjanic oo Juventus ka tirsan balse Camp Nou doonaya, Juve ayaa doonaysa inay xiddig tayo leh Barca kaga bedelato 30 sano jirkan.